लुटमा चोली उधारेकि सुष्माले बबाल डान्स गरेर फेरि मच्चाइन अर्काे हँगामा – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > लुटमा चोली उधारेकि सुष्माले बबाल डान्स गरेर फेरि मच्चाइन अर्काे हँगामा – भिडियो सहित
admin December 15, 2018 भिडियो, मनोरञ्जन 0
काठमाडौँ । नायिका सुष्मा कार्की डान्स गर्ने विषयमा अब्बल कलाकार हुन् । उनको उध्रेको चोलीमा जस्तै सुष्माले धेरै हट र रोमान्सले भरीएका गीतमा काम गरेर आँफुलाई पोख्त भएको सावित गरिसकेकी छिन् । तर बेलाबेलामा विभिन्न विबादका कारण चर्चा र विवादमा आइरहने नेपाली सिने जगतकी अभिनेत्री सुष्मा कार्की फिल्ममा भने सोचेजसरी जम्न असमर्थ बनिन् ।
फिल्ममा काम पातलोगरी पाउन थालेपछि सुष्मा आजभोली सामाजिक सञ्जालामा निकै सक्रिय रहेकी छन् । मोडलिङबाट आफ्नो करियर सुरु गरकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्रबाट डेब्यु गरेकी हुन् । उनी फेसन सोमा पनि उत्तिकै सत्रिय रहने गर्छिन् । उनले कयौँ म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय पनि गरिसकेकी छन् ।
केही समय अगाडी आफ्नै पोष्ट प्रोडक्सनको फिल्म बारका निर्माताले यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा निकै चर्चामा आएकी सुष्मा विदेशमा हुने कार्यक्रमहरु र देशका विभिन्न स्थानमा हुने शो र महोत्सबमा भने बाक्लैगरी उपस्थित हुँदै आएकी छिन् । उनै हट सुष्माले अर्कौ बबाल डान्स गरेकि छिन ।
जेठी श्रीमतिसगँ डिभोर्स भैसक्दा पनि बढ्यो माया, कान्छी छोडे सधैं साथ दिने भन्छिन् सबिना
साली नदी मन्दिर र स्वस्थानी कथाको रोचक सम्बन्ध! के छ रहस्य? भिडियोमा हेर्नुहोस्!